Kac Book soo xigsaday: 7:00 A.M. Logic — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Waxaan ahaa shan iyo toban sannadood jirtay iyo intii aan nolosha la geddisan jeestay. My name iyo muuqaalka lahaa hadduusan beddelmin, laakiin wax walba oo kale igu saabsan lahaa. Waxaan ahaa qof aad u kala duwan ka badan waxaan lahaa sanad ama laba ka hor. Waxaan ula jeedaa ma sida marka dadku kulliyad iyo tagaan naftooda dib-u-abuuro la naanays cusub iyo shakhsiyaad; Waxaan ula jeedaa wax weyn baxeen gudaha iga. Waxaan noqday Christian a. Waxaan dareemay cusub. Waxaan dareemay nool.
Waxaan dareemay in si wanaagsan aan lahaa in ay ku dhawaaqdo in qof kasta oo wax maqli lahaa, gaar ahaan saaxiibaday dhow oo qoyska. Qof kasta oo ka jawaabay duwan in isbedelka ku dhacay ii-qaar ka mid farxad, dadka kale la iska caabin-laakiin waa isku wada hadalka ayaa mar walba taagnaa ii.
Waxaan ahaa nin waayeel ah kan aan si weyn u ixtiraamo hadlaya, faraxsanahay in aan u sharaxno qorshe kulankeygii iigu waayo, Ilaah lagu maamuusayo la nololeed, si gaar ah aan Ehelkeedu galmada. Waxaan isku dayay in ay is dejiyaan oo ku saabsan, laakiin waxa ay mar walba ahayd adag tahay in la qaban aan farax in. Sida erayada -Brazil oo carrabkayga ka xawaaro ah adaanaha, Waxaan ka helay dareenka ah in uusan sidii ugu faraxsanahay sida aan ahaa. Wuxuuna doonayay inuu aamusnaan dhagaysan, laakiin uu wajiga kaga jawaabay ka hor afkiisa lahaa fursad. Waxa uu u muuqday kalabadhkeeda ku shuqloonyihiin Nicmo iyo barka walaacsan.
Wuxuu i siiyey eegno wareersan oo si deggan weydiiyay, "Maxaad nolosha qaadashada si dhab ah, nin dhallinyaro? Maxaad u doonaysaan si adag tahay in la sameeyo wax kasta oo xaq u? Dhalinyarada waa markii ugu marka aad isku ciyaartid badan, iyo in ay okay. Just naftaada ku raaxaysan, ka khaladaadka kuwa bartaan, iyo hesho halis ah marka aad ka weyn. "
Waxaan la yaabay. Qaar ka mid ah ayaa laga yaabaa in la taliyayaashiisa in sida xoraynayaa oo daacad ah, laakiin ma ahan sida ay u dareemeen ii. Waxaa dareemay caqabad iyo marin habaabis. Waan ogaa waxa uu sheegay in ay ahayd qalad ah, laakiinse waxaan jiray cusub Christian ah oo aanan ilaa xad u gelin kara ereyo.
Waxaan ka muuqataa on aragnimo in muddo dheer, laakiin halkii aan dab dampening, Waxaan qabaa kor u soo jeestay kulaylka. Anigu ma aan aqoonin badan waqtiga, laakiin aanan aqoonna xaalkiisa waan kaliya hareeraha fadhiisan kari oo sug. Waxaan u lahaa si aad u hesho ilaa iyo ku nooshahay.
OUR macquulka khaldan
Tooso waa qayb aan ugu yaraan jecel maalin kasta. Ma ahan inaanan mahad maalin cusub fursado cusub, laakiin aadan sariirta kaliya marnaba u muuqataa racfaan. Ever. Marka waa kow iyo habeenkii, helitaanka sariirta waa uun qayb ka mid caadi ah oo aan maalin ah. Laakiin marka ay todoba subaxdii, joogi sariirta waa sida ku guuleystay lottery ah.
Haddii aad eegto my iPhone, aad arki doonaa in, nasiib, Waxaan ku saabsan toban alaarmiga dhigay isabdal ah shan iyo toban daqiiqo bilaabin ka hor 7:00 a.m. maxaad? Maxaa yeelay, waxaa jira badan fursad ma aan heli doontaa ka dib markii alarm iyo tobnaad. Kuwa soo socda saddex-tiro afar iyo toban, shan iyo toban, iyo lix iyo toban-tahay fursad oo kaliya in ay si dhab ah u leeyihiin maalin.
Mararka qaarkood waxaan u malaynayaa in aan naftayda ku qanciyo kari waxba kuwa daqiiqo ee ugu horeysay hurdeysan of subax kasta. Tani waxa ay ahayd at its ugu xumaa inta lagu guda jiro sano ee kuliyad aan, marka la koro ka degaysid sariirta subaxdii dareemay sida kedis ah Mount Everest aan lugaha wax. Aniga qudhaydu waxaan u sheegi lahaa dhammaan noocyada kala duwan ee beenta, sida, "Haa, waa in aad fasalka u tagaan, laakiin waxa ay dhab ahaantii arrinta Doono?"Ama" Waan ogahay in aad la soo daahay maalin kasta saddexda toddobaad ee ugu dambeeyay, laakiin maalin kale waxa?"Ama" Malaha saaxiibkay qaadi doonaa imtixaanka ii. Waa halista. "Sad, waan ogahay. Taasi waa waxa aan soo wici 7:00 a.m. macquulka ah.
Been The aniga qudhaydu waxaan u sheegay in uu ahaa jooga sariirta ayuu wanaag iigu noqon lahaa. Calashaan ah shan daqiiqo oo dheeraad ah ama saacad dheeraad ah hagaajin lahaa nolosha. Markii aan soo jeedo ahay waxa ay u muuqataa nacas ah, laakiin kuwa daqiiqado ugu horreeya ee maalin walba waxa ay u muuqataa dhammaataan macquul ah.
Ma qiyaasi kartaa waxa uu adduunka ahaan lahaa sida haddii qofna helay ilaa ay dareemeen in sida? Ganacsi laab lahaa, dugsiyada oggolaanin inuu, xukuumadda noqon lahaa xataa more qasan badan haatan tahay. Qofna leeyihiin lahaa waqti ku filan si ay si fiican shaqadiisa; by mar qof walba u toosisay, maalinta kala bar la aadi lahaa. Runta waxa ay tahay, iyadoo aan loo eegayn waxa waqti aad go'aansato in aad ka hurdaan kici, waxa kaliya ee aad leedahay afar iyo labaatan saacadood si ay ula shaqeeyaan. Garaacista button snooze uusan dhab ahaantii aad ka iibsan waqti kasta oo dheeraad ah. Your shaqada kaliya ma heli sameeyey.
Nasiib darro, kuwo badan oo inaga mid ah ayaa la ansixiyay 7:00 a.m. macquulka ah sida hab nololeed. mararka qaarkood waxaan u wac baqe. Waxaan aadan dareensaneyn sida wax qabanayaan in la joogo, si aan go'aansanno in aan iska fogaysid ilaa wakhti danbe mooye. Mararka qaar waxaan u samayn wax yar, sida qaadashada qashinka, waxbarasho baaritaan, jawaabay shaqo e-mails, ama ku soo noqonaya Hooyo ee phone call.
Laakiin baqe aan si dhab ah loo xaliyo wax kasta oo, sidaas darteed waa fikrad xun in dib loo dhigo hawlaha maalinlaha ah ilaa daqiiqada ugu danbeysa. Waa fikrad ah xitaa ka sii daran in ay dib u dhigto nolosha laf ahaanteed.
MAXAY AAD KA FILI?
Aan daacad. Our dhaqanka aysan inta badan dadka ka filayaan badan ilaa ay tahay jir. (Waxaan ka fogaadaan doonaa dembi qof oo aynu aad u qeexaan jir.) Sida laga soo xigtay qaar badan oo, dhalinyarada ma aha markii ugu for masuuliyad weyn ama filasho. Waxay ku yidhaahdeen, "Waxaad dhali doonaa culaabta mas'uuliyadda inta ka dhiman noloshaada, sidaas raaxaysan yaraantaada inta aad awooddo!"Dadka u muuqdaan in ay nagu filan si khafiif ah oo dhan wada qaadannin nolosha ilaa aan ka gaaro in sixir, da'da loo aabo yeelin ee mas'uuliyadda. Ma siddeed iyo toban? Ma mid ka mid ah labaatan? Ma soddon? Your malee u fiican yahay sida anigaa iska leh.
Waxaan la sheekaystay la kabalyeeri ah Phoenix ma hal habeen aad u dheer ka hor. Isagu ma uu ahaa wax badan ka yar oo aan aniga ahayn, u badan tahay in uu horraanta labaataneeyada. Waxa uu ahaa xaqiiqdii saaxiibtinimo ka joogo ayaan meel fadhiistay, oo aan kor ku dhamaaday isagoo dabiicaddiisa wanaagsan,. Ayaan waxaan isagii weyddiistay oo dhan su'aalo yar-hadalka caadiga ah: Halkee ka timid? Intee le'eg ku leeyihiin aad halkan soo shaqeeyay? aad ku tufi doonaa in aan cuntada?
Sida uu ku jawaabay su'aalaha aan, waxa uu ahaa cad in uu soo iibsaday gelin 7:00 a.m. macquulka ah. Wuxuu ii sheegay in uu kaliya ku noolaa Phoenix dhowr bilood. Ka hor inta in uu ahaa in Nevada, ka hor inta California in, iyo ka hor in uu ku noolaa on Coast East ah. Halkaa marka ay marayso, waxaan bilaabay inaan naftayda weydiinaya sida aan isaga ku tilmaami lahaa in artist sawir bilays ah, kaliya haddii ay dhacdo waxa uu ahaa mid carcarara of sort qaar ka mid ah.
Laakiin markii aan isaga la weydiiyay sababta uu u dhaqaaqay agagaarka aad u badan, halkan waxa uu ii sheegay: "Just, sababtoo ah. Ma doonayo in uu sii joogo hal meel, oo waxay qaadan on farabadan masuuliyada. Waxaan ahay dhalinyaro ah, nin. Waa aan waqti ay ku sahamiyaan kaliya, oo aan hoos loo soo galla la farabadan of ballanqaadyada. Bal yaa og, malaha aniga qudhaydu waxaan ka heli doontaa. "
Aad ayaan ugu xumahay laakiin ma yaabay inuu jawaab. Dabcan waxaa jira wax qalad ah la dhaqaaqin a badan ama is-daahfurka, laakiin waa ay jiraan xilli ciyaareed ee hore labaataneeyada ama xataa our da'yarta-marka nolosha ma run ahaantii arrinta? Habboon tahay in aannu qaban off on dhan xukumay, ballanqaadyada, iyo halista ilaa wakhti danbe mooye?
AAD IT aamini karaan?
Waxaan maqlay gabay maalinta kale oo qabsaday dhinacaasi dhammaataan. lyric ayaa u tegey, "Waxaan ku faraxsan tahay, free, jahwareer, oo keli ah waqti isku mid ah. "
Waxaan ogahay qaadashada on Taylor Swift ayaa sidoo kale aan loogu talagalay dadka ee la soo dhaafay (u baahan nahay inaan idin xusuusiyo saabsan Kanye?). Laakiin isagoo doonaya inuu qaato halista iyo baaro waxa ay tiri iyada oo song waxaan ahay "22." Waan ogahay waxa kaliya song a xiiso leh, si aanan rabin in ay u overanalyze. Waxaan qabaa iyadu si guul qabtay dareenka dhagaystayaasha iyo ruuxa da'da. Laakiin aragtida uu yahay oo dhan khalad.
Waxa loola jeedaa, sida ay tiri in gabaygii, inay "dareemaan iyo laba iyo labaatan"? Heesta dabaal nooca riixdey, light, iyo qaangaarnimada dhalinyarada ah ay fududahay in badan oo inaga mid ah ku riyoon ku saabsan. Nasiib darro, waxay soo jeedisay in farxad iyo xoriyad this waxaa laga helaa qasan, warwareeggayga, mararka qaarkood loo naxo. Waxaa jira jihada lahayn, ma xiiso leh mas'uuliyadda-kaliya qasan. Waa in 7:00 a.m. macquulka ah mar. Yaa waqtigii nolosha markii aad dareento laba iyo labaatan? Swift ma dhuminnin dhinacaasi kor; ayaan waxaan lagu iibin macquulka this kaani oo kale mar. Laakiin waxaa la aamini karo?
Haddii iyo haddii aan this 7:00 a.m. macquulka ah waa lagu kalsoonaan karo waxay ku xiran tahay qofka aad tahay iyo waxa aad la abuuray, waayo,. Haddii aad la abuuray oo keliya is-ku qanacsan iyo Raaxo, markaas xoorteen nolosha dhabta ah ilaa wakhti danbe waxaa laga yaabaa in doorashada ugu fiican ee. Haddii aad tahay qof wax ka badan qof kale raadinayaa naftaada, ka dibna waxaa laga yaabaa in macquulka kabalyeeri dhalinyarada u muuqdaan codka quruxsan. Waxaad sugi karin ilaa wakhti danbe mooye in toos haddii aad rabto in aad. Laakiin waxa haddii aad la abuuray wax ka badan?
*Tani waa hoostana aad ka cutubka ugu horreeya ee buugga cusub ee Trip, Kaca. Ha illoobin, marka aad ka hor-si Kac by January 26, waxaad heli doontaa farabadan hadiyado for free, oo ay ku jiraan track gunno ah oo aan ma ka dhigi on album ah. Halkan waxaa ku qoran dhammaan faahfaahinta ku soo furatay hadiyadihiinna: http://risebook.tv/preorder
muhiimka ah • January 8, 2015 at 1:18 pm • Reply
mahad woow unahay Trip Mr Lee for this… Waxaan ka dhigay xal this for 2015 in habeen walbana waxaan soo toosi doontaa at 3 oo waa run waxaan had iyo jeer toos laakiin hubi waan ku baryayaaye, sida caadiga ah aan la fududayn by leh sanadka ma ihi weli waa yar yahay, waxaan ula jeedaa qof ay weli diraya salaanta cusub sanad ku faraxsan markaas waxaan qabaa waxaan ahay kaliya 20 ha i sugto marka am 30 oo ay leeyihiin qoyska ka mid ah, kids, shaqo iyo nin ka dibna waxaan ku yeelan doonaan unahay in ay u duceeyaan… laakiin mahad xabbad this sidee baan jeclaan lahaa buugga oo dhan aad ka heli karaa codadka aad wargelin. .. si kastaba Ilaah ha idiin barakeeyo !! :-)
Yolanda Delacerda • January 8, 2015 at 1:31 pm • Reply
Tani waxay gabi ahaanba waa qofka aan ahay XAQA NOW! Waxaa wax laga xumaado, laakiin uma baahna si ay u qariyaan. Anigu waxaan ahay hal hooyo, ardayga waqti buuxa, leedahay ganacsi yar yar, hadda hogaamiyaha shaqaalaha kaniisad aan beeray September a 2014 (shaqaalaha aan la bixin), iyo waqti dhiman shaqada guriga ammaan ah ee gabdhaha da'da yar kuwa dhibanayaasha ka ganacsiga galmada iyo haa tahay xitaa ka dib markii reading maxaan sameeyaa waxaan hubaa aad hore u daalan! Aniga qudhaydu waxaan dhicin habeen walba ka hor inta sariirta si toos ugu yaraan by 5:00 a.m. oo qarka u saaran alaarmiga oo dhan iga ..(haa ALL waxaan ula jeedaa shan ka on my phone ka dibna mid ka mid ah in uu leeyahay xiriir)had iyo jeer in ay 5:45, 6:00, 6:15, 6:30, iyo 6:45…waxa waqti kula tahay waxaan kor maanta toosisay?!? 7:00!!! Haa, Waan ogahay si caajis Anigu waxaan ahay… Laakiin runtii waxaan ahay daal…waxaa laga yaabaa in aad u badan on my saxan, sidaas darteed waxaan u tegayaa inaan soo jaray waxyaabo hadda, laakiinse ugu dambeyntii aad post waa sidaas runta ah. Waxaan noqon lahaa hab ka badan wax soo saar wax kasta oo ku lug leh in aan ahay, ugu muhiimsan ayaan siin karaa waqti dheeraad ah oo ay Ilaah u. Sidee doqon ah run ahaantii ay tahay in waqti qaali ah sida. Sida 25 sano jir ah( Aniga 25) ama xataa sida a 30 ama 40 sano jir aan la waa in maalin kasta oo nool oo leh ujeedo ah sababtoo ah waxaan heysanaa hal, in ay ku noolaadaan maalin kasta ma khasaariyey iyo in ay wadaagaan eraygiisa, oo ay qaataan daqiiqad kasta oo macquul ah si ay u koraan isaga xagga nolosha maalin kasta. Thanks for wadaago iyo jeed rajo aad riwaayad ee Orlando!!!
Mindy • January 8, 2015 at 1:45 pm • Reply
post Tani waxay yimaadeen waqti kaamil ah, sida xal aan sanadka cusub ee ahaa in ay ka dishibiliin, dheeraad ah oo si gaar ah in ay toos hore oo aad Word maalin kasta si aan nolosha waxaa had iyo goor loo bedelay waxay by. Waad ku mahadsan tahay gargaarka!
Dardaaranka • January 8, 2015 at 1:59 pm • Reply
Ilaah waa u roon. In toddobaad ee la soo dhaafay ka hor inta uusan dugsiga dib u bilaabay for my 5 ina sano jir ah oo uu guriga ka leh inuu hooyaday fasaxyada ku soo laabtay (xitaa xagaaga) subax kasta ay 'waan toosi doonaa ilaa in 20 mins,’ ama wax kasta oo cudur daar laga yaabaa oo ku dhuftey button snooze ah. Man hor inta aan kacay for shaqada aan mar hore maalintii aan dhan ka soo qorsheeyey oo aan ka dhaadhiciyay sida ay u sababta hurdo this dheeraad ah ka caawin doono laakiin mar kasta waxaa i yeelo lahaa in uu sii joogo sariirta halkii ay kaalmo. Wax badan ayaa ka dhacay 2014 oo waxaan ku dhuftay dhagaxii weynaa xun hoose! kaliya ku mahadisaan Ilaah baa i tusay inuu naxariistiisa iyo nimcadiisa dib u dhiska noloshayda iyo billowdo oo ka heli ujeedada uu leeyahay ii dhulka this sababta oo ah waxaan u qalmaan ayaan u ahay. In badan oo ka joogto in reading erayga iyo fahamka Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise waa eraygii nool waxa uu inoo sheegayaa in caajisnimada, hurdo, iwm. oo dhan waxay keeni doontaa in saboolnimada, oo musiiba ah, iyo xitaa dhimasho. Dad badan oo dembi ayaa dhibayay noloshayda iyo inaad tahay caajis, helitaanka in yar baad seexataa dheeraad ah ayaa dib ii qaadday uga noqdeen nolosha Ilaah ayaa ii. Maalmahan waxaan toos 20 ama 30 daqiiqo ka hor inta aan qaylo iyo codka kuwa maqla ii sheego 'aad u hesho aroor hore bilowdo', ama xataa shaqada 'ma this dhigay off hadda u samayn, saaray dadaal dheeraad ah waxa aad samaynayso aad si fiican u samayn kartaa.’ Waxaan la diriray Rabbiga, waayo, aad u dheer oo aan u arkaa samaynaya wax aan jid la doonayo inuu i qabriga hore. Weli waxaan ahay ma halkaas oo aan doonayaa inaan noqon laakiin ay barteen in ay ku siiyaan in ruuxa oo kaliya maqli aan loo eegayn waxa laygu ay xoojiso si ay u sameeyaan laakiin waxaan ahay aadanaha oo waxaan haystaa rabitaanka in ay dib ugu jidadkayga in. Waxaan ka cabsi qabaa Eebe ka soo Dejiyo daynin, Uma maleynayo waan dhammaystiri karo ujeedada aan u abuuridda, Haah aan si fiican maanta hadda sameynayo ama, laakiin waxaan noqon kartaa joogto ah maalin kasta maalinta oo dhan Ilaah raalli iga qayb sameeyo sida isagoo Masiixi ah. Its xiiso leh in uu akhriyo oo ay bartaan, laakiin aniga ahaan waxa uu ahaa ciriiri inaad qabaa inaan sameyn kara waxa Ilaah waxa uu rabaa si joogto ah oo aan dib ugu noqdo waxaan ya la heli doonaa Ilaah berri sababtoo ah waxaan maanta isku dhexyaacsan. Man saaxiibkay muddo dheer ka hor i riixay in la beddelo waxa aan dhegeystaan ​​oo waxaan idiin ballanqaadayaa waxaan kaliya ku bilowday dhegaysiga aad hadda safar muddo wiig ah oo aad horey u jirtay saamayn on my nin nolosha. Waxaan u mahad celineynaa, raalli post dheer oo kaliya TGS sheegi ya ku mahadsantahay inaad music iyo hoostana waxaa kor ka dhan isagoo intaa ku daray in aan marag in Ilaah waa dhabta ah iyo in kastoo aan dareemaan cidlo isagoo hal aabbe halkan in this gobolka weyn ee Georgia la dad aad u badan, Ilaah shaqeyn doona dadka kale in ay hubka ay gaaraan ama aad marna em kulmaan si ay ii wadid jihada saxda ah.
Leonel Arce • January 8, 2015 at 2:35 pm • Reply
Your walaalkay artist tayo baan kor eega inaad I'm25 ay noqon doontaa 26 this May sidaasi darteed waxaan rajeynayaa ahu wuxuu igu isticmaalaa hab xoogga badan oo uu ammaantiisa iyo maal lagu daray i jeclaan lahaa in ay sameeyaan waxa adiga iyo artist kale injiilka ku wacdiyo in hab in aysan ka dhawaajin si diinta iyo dadka waawayn ay u noqon waayeen oo iska socon laakiin la cusboonaysiin karo iyo bedelay iyo bedelay wanaagsan maxaa yeelay, codkii in gudaha ku hadla gudahood noo sheegaya kuwa halkaas, waxaa jira kuwa nala mid ah oo doonaya of our ujeedada waxa ahu rabaan, iyo baahiyaha naga. Thanks for samaynta kitaabkan aan la sugi karin si aad u hesho Waxa aan bilaabaya in ay horay u jeclaan!
Joel • January 8, 2015 at 3:28 pm • Reply
“Haddii aad eegto my iPhone, aad arki doonaa in, nasiib, Waxaan ku saabsan toban alaarmiga dhigay isabdal ah shan iyo toban daqiiqo bilaabin ka hor 7:00 a.m. maxaad? Maxaa yeelay, waxaa jira badan fursad ma aan heli doontaa ka dib markii alarm iyo tobnaad. Kuwa soo socda saddex-tiro afar iyo toban, shan iyo toban, iyo lix iyo toban-tahay fursad oo kaliya in ay si dhab ah u leeyihiin maalin.”
land. Si run. Wax dhibaato la mid ah. walax Good. Waxaan indhaha ku hayaa inaan ku buugga reading!
John • January 8, 2015 at 4:03 pm • Reply
dhiirigelinayaa. jeer aad u tiro badan button snooze laga yaabaa in aan ku dhuftay. Waxaan doonayaa in ay ku noolaadaan nolol in farta Ilaah u wanaagsan. Waxaan u baahanahay inuu ku tukado, iyo ugu dhakhsaha badan u hesho qorshe. Mahadsanid, TL.
holli Simpson • January 8, 2015 at 4:46 pm • Reply
Awesome! dhagaysto & heshiis & qosol. Mahadsanid!
Valentin • January 8, 2015 at 5:39 pm • Reply
Waxaan doonayaa in buuggan. Waa ii 18 sano heesaa Christian jir Makedoniya ka.
Joanna • January 8, 2015 at 9:54 pm • Reply
tani waa si run iyo qoto dheer. Ma la dhibtoonayay ah 7:00 macquulka a.m gaar ahaan tan iyo jaamacadaha, halkaas oo waxa ay noqotay mid aad u adag laga bilaabo si toos ah in wakhtiga.
Carl • January 8, 2015 at 10:41 pm • Reply
aad marag nooca i soo xusuusinaya shaqasiyadeyda markii aan yaraa! Runtii riyaaqay aad aragti ku saabsan NOLOSHA!!!
Melyssa • January 9, 2015 at 3:28 waxaan ahay • Reply
dhaqsaha badan ma kaftan, Waxaan loo baahan yahay in this akhri si xun hadda. Inaan ka soo raynayo diyaar u ah inay tagaan si ay dal kale muddo sannad ah si ay u samayn ergooyinka iyo dadka oo ku saabsan CIISE sheeg, laakiin maalmood ee horkacaya aan ka tago (kuwaas oo hadda waa kaliya 9,) ayaa ka buuxa ii of ee 7:00am macquulka ah. Waxa ugu waa, in kastoo, in subax kasta marka aan ma toosi hana iyo waxaan aakhirka hurdada oo gebi aad u soo daahay, Aad baan u xanaaqsan naftayda at! Waan ogahay wax baan 7:00am macquulka ah, laakiin waxaan okay la ma ihi. Waxaan kaliya ma oga waxa la sameeyo si ay u bedesho. Waxa ay u muuqataa sida xitaa marka aan si dhab ah ha isku dayaan, Weli waxaan ku guuldareysato. Thanks for this qoraal, Trip. Anigu waxaan ku xujeeysay.
BungansaPaul • January 9, 2015 at 7:11 waxaan ahay • Reply
Wow, i jecel this soo badan. Jeclaan lahaa in aan ka heli karto buugga.
Brian Anthony • January 10, 2015 at 2:24 waxaan ahay • Reply
Ilaah mahad! Ma sugi karo inaan akhriyo buugga cusub… Waxaan dhawaan lahaa badalida wadnaha ah oo ku saabsan 9/29/14, oo aan uga mahad Ilaah maalin kasta wuxuu barako, aan dhibic, sida buugga ugu dambeeya “Life Good” waxaan u muuqdaan in ay ku riday ama iimaanka iyo is-aaminaad in waxyaabo badan oo khalad.. Ilaah ha barakeeyo! #Unashamed #116 #DontQuit #CantwaittoreadRise
Domeanica • January 12, 2015 at 5:40 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay ii oggolaanaya in ay quusin galay hoostana ka buugga cusub. Waxaan rumeysanahay this iftiiminaya dhaqankeena iyo xataa hadalka lagu bilaabo. Waan ogahay qaar ka mid ah kiristaan ​​yar in si xaqiiqo ah maqsuud doonaa this aragti daacad ah iyo sidoo kale. Ilaahay ha barakeeyo iyo waxba ku baryayaaye,, laakiin barakeysan oo arintan ku wajahan.
Burton • January 12, 2015 at 6:23 pm • Reply
Huuuum, 7:00 am macquulka ah… Ma dhihi karo waxaan MA this jeclaan! Reading this dhigay ii malayn inay jeer aan toos oo dhan dib, eegto waqtiga, oo waxaad ku tidhaahdaan, “6:00? Waxaan qabaa in go'aan aan koowaad ee maalintii uu noqon doono… si ay u tagaan dib u seexan.” Waan jeclahay hurdadiina waa iga! ma qabatimi, laakiin ha i dhibin. halkii waa waxaan idinku leeyahay, “6:00? Waxaan qabaa in go'aan aan koowaad ee maalintii uu noqon doonaa in uu akhriyo erayga Ilaah oo Ilaah u barya.” Ku mahadsan tahay in aad safar for this wadaago. Sidaas faraxsanahay aad buugga, Hore ayaan u pre-amartay!
Josh • January 13, 2015 at 11:20 pm • Reply
Trip alaabtayda oo awood leh. Thanks for wadaago wixii Rabbiga ayaa ku sii jireen qalbigaaga arrintan la xiriira. Your wasaaradda waa barako badan, Rabbiga ha ku barakeeyo.
Emmanuella James • January 29, 2017 at 12:24 pm • Reply
Noocan oo kale ah post a aad loo jecel yahay. Waxaan ahay sida taageere weyn u ah in aad music. Waxay igu dhalisay soo badan. Ogaanshaha inaad tahay labada blogger ah iyo qoraa ahaa maskaxda ku-kacday, tan iyo markii labada Waxaan ahay oo la raadinaya qof ku eegin. Xaqiiqdii waan jeclaan lahaa in aan ka heli karto nuqul ka mid ah buugga.
KenaMuigai • June 16, 2018 at 2:11 pm • Reply
Wow! My saaxiib maqlaa aad music oo waxay ii sheegeen in aan u jeclaan lahaa. Waxaa hubaal ah in aan maanka ku Suurka. Waxaad tahay dhabta ah, daacad ah oo ay jiraan gabi ahaanba garaaca ma ku saabsan baadiyaha kula. Waxaad si aad u badan ayaan igu dhalisay iyo in kastoo aan ahay 18 iyo dareemayaa inaan meelna u socon, waxaa jira runta aad u badan – daacadnimo cayriin – iyo eegayaan ereyga Ilaah aad ka in aan sidaas loo waxyooday oo dano ahay inuu ka tago farabadan of caadooyinka xun. Imma cuslaataan gal rajo ah in in ay jiraan wax fiican soo socda iyo gaar ahaan ma ay rumaysnayn ah 7:00 a.m. macquulka ah qofna ma'arkin aan gebi ahaanba la xidhiidhi karaa oo waa wax aan ka shaqeeya. Thanks!!
P.S. Raadinta weeraryahanka si music dheeraad ah oo laga cabsado! :)
maalin Trip Good.